Flim2MM: September 2017
IMDb Rating (8.6/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (95% ) ရရှိထားပါတယ်။
(Raiders of the Lost Ark ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ နာဇီတွေ အသဲအသန်လိုက်ရှာနေတဲ့ ဒီသေတ္တာလေးဟာ သူတို့ရန်သူတော် ဂျူးတွေရဲ့ ဘာသာရေးပစ္စည်းပါ။ Torah နဲ့ Bible ကျမ်းစာတွေအရ ဒီသေတ္ကာလေးကို ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကို ရေးထားတဲ့ ကျောက်တုံးနှစ်တုံး ထည့်ဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်က ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျူးတွေ အီဂျစ်ကနေ မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်၊ ဘုရားသခင်(ဂျူးအခေါ်ဂျေဟိုးဗ)ကတိပြုထားတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ခုဆီးရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဒီသေတ္တာက အခက်အခဲဟူသမျှကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေရော၊ ဂျုးတွေပါ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဒီပစ္စည်းဟာ ဘီစီ ၅၉၇၊ ၅၈၆နှစ် ဘေဘီလိုနီးယန်းတွေ ဂျေရူဆလင်ကို ဝင်စီးချိန်မှာ ဘုရားကျောင်းမှပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခိုးခံရတာလား၊ ဖွက်လိုက်ကြတာလား၊ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရလားဆိုတာ ခုထိမသိကြရသေးပါဘူး။
ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအရ သေတ္တာဟာ ပထမဆုံးဘုရားကျောင်းထဲက ဝင်္ကပါလှိုဏ်လမ်း တနေရာရာမှာ လှုံခြုံစွာရှိဆဲပဲလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်မှာ ထိုလှိုဏ်တွေထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အကြောင်းက ခုအဲဒီနေရာဟာ မူဆလင်တွေရဲ့ နာမည်ကြီး Dome of Rock ဗလီ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Ark ကို အီသီယိုးပီးယား မင်းညီမင်းသားတစ်ပါးက လွတ်ရာကို ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး မြို့ငယ်တစ်ခုက ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဖွက်ထားခဲ့ပါသတဲ့။ ခုထက်ထိ အဲဒီ ဘုရားကျောင်းမှာ Ark ကို ဂျူးဘုန်းတော်ကြီးတွေက စောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်။ ပညာရှင်အဖွဲ့တွေက လေ့လာခွင့်တောင်းတော့ စောင့်တဲ့လူကလွဲရင် ဘယ်သက်ရှိကမှ Ark ကို ကြည့်ခွင့်၊ ဖွင့်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျား။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 752 MB
ဗြိတိသျှ တီထွင်သူတယောက်၊ တရုပ်လူမျိုးသူခိုးနဲ့ ပြင်သစ်အနုပညာရှင်ကောင်မလေးချောချောလေးတို့ရဲ့ စွန်းစားခန်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဖီလီးယက်ဖော့ဟာ အင်္ဂလန် ဗစ်တိုးရီးယန်းမှာ နေထိုင်တဲ့ တီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ရက် ရှစ်ဆယ်နဲ့ပတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
နောက်ထပ် တီထွင်သူ တစ်ယောက်က သူ့ကို အဲ့ဒီခရီးသွားဖို့ စိန်ခေါ်မှုအလောင်းအစားကို
ကို ဖီလီးယက် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့နဲ့ အတူ ခရီးသွားဖော်ကတော့ သစ္စာရှိ အိမ်စေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပါဆီပါတောက်နဲ့ လှပတဲ့ လမ်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုနစ်ခ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ သယ်ယူပုိ့ဆောင်ရေးတွေ ပါဆီပါတောက်ရဲ့ သိုင်းပညာအစွမ်းတွေနဲ့ သူတို့ သုံးယောက် ကမ္ဘာပတ်ဖို့ ထွက်လာကြပါတယ်။
သူတို့ခရီးစဉ်မှာ ဘာတွေဘယ်လိုကြုံတွေ့ကြမယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကျောက်စိမ်းဆင်းတုကိုကော ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား လောင်းထားတဲ့ အလောင်းအစားကိုကောနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုများ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ဆိုတာကို ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်ရာ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်များနဲ့ရှူစားနိုင်ဖို့ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုံးဗျာ..
[FILE SIZE]:…………………….….:) 952 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 00 mins
Posted by Y Junction at 8:24:00 AM 1 comment:
Labels: Action, Adventure, China, Comedy, Hollywood
ဘာသာပြန် Con Pike ရဲ့ 21+ အီတလီ ဇာတ်ကားတကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဥရောကတွေဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမေရီကန်တွေတောင် ဆရာခေါ်ရတယ်ဆိုတာကို ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးတွေက သက်သေပြနေပါတယ်။
ဥရောပသားတွေရဲ့ ပွင့်လင်းမှုနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာဆိုတာ အများတကာတွေထက်ပိုပြီး သာလွန်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ လူအိုတယောက်နဲ့ ငယ်ငယ်ချောချောအမျိုးသမီးလင်မယားရဲ့ လိင်သာယာမှုတွေကို ရည်ရှည်တည်တံ့ဖို့ ဘယ်လိုနည်းဗျူဟာတွေခင်းကြမလဲဆိုတာကိုတော့…
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Erotic, History, Romance
[Translated By]:……………………..:) Con Pike
Posted by Y Junction at 7:24:00 AM 8 comments:
Labels: Drama, Erotic, Europe, History, Romance
Posted by Y Junction at 10:54:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 9:54:00 PM 1 comment:
ကေးလ် ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူ့အဖေနဲ့ ငါးသွားမျှားပြီးပြန်လာတော့ လမ်းမှာ ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး အဖေ ဖြစ်သူဆုံးသွားတယ် ။ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ စပိန်စကားပြောသင်တန်းဆရာက ကေးလ်ကို သူ့အဖေပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုလိုက်တယ် ။ သူ့အဖေကို စော်ကားလို့ ကေးလ်က ကျောင်းဆရာကို လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်လိုက်တယ် ။ အဲဒိလက်ရောက်မှုအတွက် ကေးလ်ကို တရားရုံးက နေအိမ်ခြေချုပ် သုံးလ ချလိုက်တယ် ။ ကေးလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ဘယ်မှ မထွက်ရပဲ နေအိမ်ထဲမှာပဲ သုံးလ နေရတော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အိမ်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေပါဘူး ။ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကို လိုက်ပြီး လေ့လာနေပါတော့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ညမှာ ရောဘက် တာနာ ဆိုသူက သူ့အိမ်ကို ကလပ်က မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်ကို ခေါ်လာတယ် ။ အိမ်ထဲမှာ မိန်းမလှလေးနဲ့ ရောဘတ် တာနာတို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတာကို ကေးလ် တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ကေးလ် သတိထားကြည့်မိတယ် …. မိန်းမလှလေးဟာ ဘယ်တော့မှ ရောဘတ် တာနာအ်ိမ်က ပြန်ထွက်မလာတော့ပါဘူး ။ ကေးလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေး ထင်တာက ရောဘတ်တာနာဟာ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်က ပြောင်းလာတဲ့ မိန်းမလှလူသတ်သမားပေါ့ ၊ အဲဒိတော့ ကေးလ်ဟာ သူ့သူငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီး ရောဘတ်တာနာရဲ့အိမ်ကို အပြင်းအထန်လေ့လာပါတော့တယ် ။ ဒီတော့က …. ရောဘတ်တာနာဟာ တကယ်ပဲ လူသတ်သမားလား ၊ ကေးလ်ကပဲ နေအိမ်ခြေချုပ်ကြောင့် အထင်လွဲတာလား ၊ ဇာတ်ကား အစ အဆုံး အသည်းတအေးအေးနဲ့ ကြည့်ရှုကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
[GENRE]:……………………….… .:) Drama, Mystery
[FILE SIZE]:…………………….….:) 652 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 45 mins
Posted by Y Junction at 8:01:00 AM No comments:
Labels: Drama, Hollywood, Mystery
၂၇၂၂ပေ အမြင့်ရှိပြီး UAE က ကမ္ဘာအရှည်ဆုံးတာဝါဖြစ်တဲ့ Burj Khalifa မှာ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းတွေကို စွန့်စွန့်စားရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ တွမ်ခရုစ် အနေနဲ့ ဇာတ်ကားပီပြင်အောင်ရိုက်လိုတဲ့အတွက် တာဝါရဲ့အမြင့်ပေ ၁၇၀၀ လောက်မှာကြိုးနဲ့တွဲလောင်းနေပြီး လူစားမထိုးပဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ ဒီကားကို အရင် MI ကားတွေလို 1,2,3 မတပ်ဘဲ Ghost Protocol ဆိုပြီးသီးသန့် ခေါင်းစဉ်တပ်တာကို တွမ်ခရုကတော့ တော်တော်လေးအားရကျေနပ်ပါတယ်တဲ့။ သူကတော့ 1,2,3 ဆိုပြီး နံပါတ်တွေနဲ့ဘောင်မခတ်ပဲ ဇာတ်ကားတကားကို အရင်အရိပ်တွေမရှိပဲ ဖန်တီးရတာကို နှစ်သက်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုတော်တော်ရခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပါတယ်။
MI ဇာတ်ကားတွေကတော့ အညွှန်းအထူးရေးစရာမလိုပါဘူး။
၁၉၉၆ TV series ကနေ ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ရမှာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ MI5 အထိပါပဲ။ 2018 မှာလည်း MI6 ထွက်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ethen Hunt ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ကို Hero အဖြစ် စွဲမှတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Tom Cruise ရဲ့ ငယ်ရွယ်စဉ်က သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြင်ရမှာပါ။
ခိုင်မာတဲ့ ဇာတ်အိမ်ကြောင့် ဇာတ်ကားတိုင်းဟာ အခက်အခဲတွေကြားက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖြစ်အောင် ရိုက်ပြထားတာက MI တွေရဲ့ဆွဲဆောင်မူရှိတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 851 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 12 mins
Posted by Y Junction at 7:12:00 AM No comments:
300 မင်းသားကြီး Gerard Butler ဦးဆောင်ပါဝင်ထားပြီး နာမည်​ကြီးသရုပ်​​​ဆောင်​​တွေဖြစ်​တဲ့ Tom Wikinson, Tobey Kebbel တို့အပြင်​ Mad Max Fury Road မင်းသား Tom Hardy တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဆိုတော့ အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ IMDB 7.3 ရနေဆဲဒီအက်ရှင်ကားဟာ Britain Box Office မှာ Top 1 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အမှတ်တရတခုကတော့ Sex Scene တခုရိုက်ခါနီးကျမှ Gerard Butlerခမျာ စိတ်ညစ်စရာ လည်ချောင်းယားယံရောဂါခံစားနေတော့ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Thandie Newton ဟာ သူ့ကိုနမ်းဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ဒါရိုက်တာ Guy Ritchie ကပညာသားပါပါနဲ့ ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ပြီး ရယ်စရာအခန်းလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တာပါပဲ..
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့ ရဲနှစ်ယောက်နဲ့ ဝရမ်းပြေးတယောက်ကြားက ကမောက်ကမဇာတ်လမ်းကို ဟာသနှောပြီးရိုက်ပြထားတဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်းတလက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်းယူကြည့်ရှုတော်မူကြပါဦး ပိတ်သတ်တို့...
[FILE SIZE]:…………………….….:) 502 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 54 mins
Posted by Y Junction at 10:55:00 AM No comments:
MI အပိုင်း ၃ ကို တင်ပေးလိုက်ပြီနော်၊ အီသန်ဟက်နှင့် လျှို့ဝှက်ယုန်ခြေထောက်လိုပဲ မြန်မာလို ပြန်ဆိုလိုက်တော့မယ်.. တွမ်ခရုအနေနဲ့ ဒီကားမှာ စတန့်တွေကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာတော်တော်များများရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ရုပ်ထုပေါ်ကိုတက်တဲ့အခန်းမှာ အလျင်လိုသွားတာကြောင့် နံရိုးနှစ်ချောင်းကျိုးခဲ့ရပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 699 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 06 mins
Posted by Y Junction at 10:22:00 AM No comments:
MI ကိုအတွဲလိုက်တင်ဖို့ တောင်းဆိုသူတွေအတွက် fix လုပ်တဲ့သူကော၊ encode လုပ်တဲ့သူကောကြိုးစားပြီး ဆက်လက်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ MI 2,3,4,5 ကိုလည်း ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 03 mins
Posted by Y Junction at 2:25:00 AM No comments:
Die Another Day ဆိုတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားသစ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ မှတ်မိကြမှာပါ မျက်နှာထဲမှာစိန်တွေမြှုပ်ထားတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားသားနဲ့ ဖိုက်ကြတာလေ။ လူမည်းမင်းသမီး Halle Berry ရဲ့ ဖွံထွားခန့်ညားတဲ့အလှကိုတော့ မြင်သာအောင်ရိုက်ပြထားတာ ဇာတ်ကားကိုပိုပြီးအသက်ဝင်စေတယ်လို အက်ဒမင်ကတော့ ထင်မိပါတယ်။ :P
ဇာတ်လမ်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ ဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါကုန်။ အကြည်နော်.. အကြည်..
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 2h 13mins
[Translated By]:……………………..:) Wai Yan Htun
Posted by Y Junction at 2:07:00 AM No comments:
လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေး မအောင်မြင်တဲ့အပြင် နာမည်ပါမကျန် အစအနဖျောက်ချင်တဲ့ သူတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ့် လျို့ဝှက်စုံထောက်တစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှင်ကျန်ဖို့ တစ်ကိုယ်တည်း လှုပ်ရှားရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
[FILE SIZE]:…………………….….:) 646 MB
Posted by Y Junction at 12:12:00 AM No comments:
ကဲ.... သိုင်းလောကသားတွေအကြိုက် အမြဲတမ်းဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ လယ်ဝေးသားလေး ကျော်မျိုးသူရဲ့ သိုင်းကားနောက်တကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ IP Man မင်းသား Donnie Yen ကဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး သူပဲ ဦးဆောင်ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာပါ။
အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း ကြိုက်ကြတဲ့ သိုင်းလောကသားတွေလက်မနှေးကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား.......
[FILE SIZE]:…………………….….:) 1 GB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 34mins
[Translated By]:……………………..:) လယ်ဝေးသားလေး Kyaw Myo Thu
Posted by Y Junction at 11:17:00 AM No comments: